Kpido: captcha | Martech Zone
Wednesday, November 28, 2012 Na Mọnde, Nọmba 27, 2012 Douglas Karr
Akpọrọ m teknụzụ Captcha asị. Captcha bụ nkwenye nke ojiji. Kama ime ka ọ dịrị ndị ọrụ mfe, teknụzụ na-akpachapụ ndị ọrụ anya ka o wee gbochie ihe odide hacking. Ghara ikwu na CAPTCHA bu ihe ngbochapu ohuru na teknụzụ OCR. CAPTCHA: Nnwale Ule Okpukpe Na-akpaghị Aka togwa Kọmputa na Hummụ Mmadụ Ewezuga Obi ụtọ, onye ọzọ na-eche na ọ dịkwa egwu. Teknụzụ Nwere Obi Ike chepụtara ụzọ ọhụrụ iji gosipụta ndị ọrụ ebe ị na-egbochi edemede hacking
Ikekwe otu n'ime ahụmịhe ọrụ kachasị njọ m na-aga n'ihu na weebụ bụ teknụzụ Captcha. Captcha bụ mgbe emere ihe onyonyo site na ọnụọgụ, mkpụrụedemede, na mgbe ụfọdụ okwu ị ga - achọgharị ọzọ n'ọhịa. Nke a bụ igbochi ụdị mpempe akwụkwọ na-akpaghị aka site na ndị na-ekwu okwu spammers. Ebe ọ bụ na ha enweghị ike ịkọwapụta koodu ahụ, ha enweghị ike ịnyefe ozi ụgha. Captcha Flaws Ọ bụ teknụzụ na-egbochi. Enweghị m ike ịgwa gị ugboro ole